I-Idyll yomndeni engasebhishi ene-sauna nezindlu zezivakashi
Uyemukelwa kule ndlu entsha negcinwe kahle e-Harängen cishe imizuzu eyi-12 uma ushayela empumalanga ye-Norrtälje.
Indlu inokukhanya kolwandle, i-50 sqm ene-conservatory ye-15 sqm ekuxhumekeni okuqondile kanye ne-sauna esakhiweni.
Endlini kukhona konke ongakudinga (ikhishi elihlome ngokugcwele elinomshini wokuwasha izitsha, isitofu, ishawa, indlu yangasese (yomlilo), i-Wifi, i-TV, umshini wokuwasha, njll.). Usofa oqinile uhlobisa igumbi lokuhlala futhi iphampu yokushisa yomthombo womoya isetha izinga lokushisa ngokunethezeka ncamashi unyaka wonke. Ukushisa kwaphansi kukho kokubili ihholo nendawo yokugezela.
Ngaphesheya kwegceke kunendlu yezivakashi enkulu engu-30 sqm kanye nencane engu-8 sqm.
Isakhiwo sizungezwe lezi zindlu kanye ne-sauna futhi sakha indawo eseceleni nengenamoya ukuze ujabulele futhi uphumule. Kukhona ovulandi kuzo zonke izindlu kanye nenqwaba yefenisha yokuphumula kanye nefenisha yangaphandle ongadla kuyo ibhulakufesi, isidlo sasemini kanye nesidlo sakusihlwa. I-grill yegesi eqinile kanye ne-halogen heater kungenza ubusuku bupholile kuze kube sebusuku.
I-Harängen nale ndlu ingafinyelelwa ngemva komgwaqo owubhuqu ongamamitha angu-2500 ubude. Isakhiwo sivikelekile emoyeni nasekubonakaleni. Kuyi-oasis ngokwayo emema izinhlobo eziningi zezinyoni. Izingwejeje eziningana zihlala ezihlahleni ezisesiqintini futhi uzobona kokubili izinyamazane nonogwaja. Zizwe ukhululekile ukuqhweba futhi bajabule omakhelwane kunomthelela umuzwa ethokomele.
Thina ngokwethu sihlala eKungsholmen eStockholm futhi sitholakala kokubili nge-imeyili, umlayezo wombhalo kanye nocingo uma kuphakama imibuzo noma imicabango.